Mpempe akwụkwọ ntanetị bụ ụdị ụdị ntanetị Email nke ị ga-agbalị
Igor Gamanenko, Semalt Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa, na-ekwu na spam ugbu a aghọwo aha ezinụlọ, ihe karịrị pasent 80 nke ozi email ọ bụla abaghị uru na ihe efu. Ọ pụtara na akwụkwọ ozi site na email agaghị ekwe omume n'enweghị nchebe spam. Ka ọ dị ugbu a, ozi azụmahịa ahụ a na-ejighị n'aka (UCE) bụ ozi junk dị na nke a na-akpọ spam. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụ ihe na-adịghị njọ, ọ dịghịkwa akpata nsogbu ọ bụla, mana mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike itinye koodu na nje virus na sistemụ kọmputa gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ichebara ọtụtụ ozi ịntanetị zitere n'ụwa niile, ị kwesịrị ilekwasị anya na nzacha email na spam ma gbalịa ha niile ịchọta nke ga-eme ihe ị chọrọ.
Nlekọta spam nke okenye:
Spam na-eto eto bụ otu n'ime ụdị nke email kachasị emetụ na nza eji maka ya ka a na-akpọkwa dịka nzacha spam okenye. Mgbe ụfọdụ, ndị na-agba ọsọ na spammers na-eji ndị ọrụ na ngwaahịa eme ihe iji zụlite mmekọahụ. Ha na-ahapụ backlinks na ebe nrụọrụ weebụ ha porn ma ọ bụ mgbasa ozi na-achọ ịkwalite ihe a na ịntanetị. Ruo afọ ole na ole, ndị mmadụ amalitela ịmepụta ihe nzacha maka ihe gbasara mkparịta ụka..Iji mepụta nza dị otú ahụ, naanị ị ga-aga ebe ntanetị nke adreesị ozi-e gị, mepụta nhazi ma tinye URL na ebe ndị toro eto na-ewute gị ruo oge ụfọdụ.
Nchịkọta ahụike na ọgwụ na-ahụ maka spam:
Ụdị nzacha spam email a bara uru maka weebụsaịtị na ndị na-ezipụ ngwaahịa na-ezute ngwaahịa ọnwụ, ọgwụgwọ anụ ahụ, ọgwụ ndị na-agbanwe agbanwe, ọgwụ ndị na-abụghị omenala na Chinese, nakwa ihe mgbakwunye nri. Ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ, ịnwere ike ịwụnye mgbakwunye WordPress dị mkpa iji gbochie spam a. Ma ọ bụrụ na ị natara onyinye ndị a na email, ị kwesịrị ịmepụta iyo ma tinye ndị ID ahụ na ntinye a iji gbochie ha ịziga gị ozi ndị iwe iwe n'ọdịnihu.
Nchịkọta ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị:
Egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbasa n'ụdị iyi egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na arụmụka ndị na-eme mkpọtụ. Ndị dị egwu, ndị na-eyi ọha egwu, na ndị omempụ na-etinye aka n'ịgbasa spam a na ịntanetị. Ha bụ ndị na-eche echiche na-adịghị mma ma na-asọpụrụ ụkpụrụ ụmụ mmadụ. Ọ bụ ya mere ha ji na-ezitere gị ozi ịntanetị ụbọchị niile ma ghara iche banyere nchebe ma ọ bụ iwu mmanye iwu. Ndị nchịkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-adị mfe imepụta, ha nwere ike inyere gị aka iwepụ ozi ịntanetị a na-enyo enyo, egwu egwu, na ihe ize ndụ nke ịnwụ ego gị.
Ọ bụ eziokwu na spam, nje, malware na ozi ịntanetị bụ nnukwu ihe ize ndụ nye ndị ọrụ weebụ. Ndị na-agba chaa chaa na spammers na-eji usoro dị iche iche eme ihe iwe na-ezuru anyị. Ọ bụrụ na ị mepụtaghị nza ọ bụla maka ozi ịntanetị ndị ahụ, ị ​​kwesịrị ịhapụ ozi ịntanetị ndị a na-akpọghị aha ndị nwere ike ịgụnye mgbasa ozi iwu na-akwadoghị, nzaghachi akpaka, nje, malware, na ụdị spam niile nwere ike ịkpata nsogbu siri ike maka gị. N'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, spam email bụ nnukwu nsogbu, mana nzacha dị n'ebe ahụ iji dozie ọtụtụ nsogbu na-eme na ịntanetị Source .